Company Profile President kuti akataura kuvanhu Enterprise Culture kukudzwa Zvitupa Brand Story Cooperative Mode Fekitori Mifananidzo Video Introduction Staff Activities Rwiyo KTC
Dyidzana Flat Panel CCTV Monitor Commercial TV Digital Signage Professional Monitor
Endoscopic Nzira Display
Kubvunza Ratidza Center
Ultrassom Image Ratidza
Multi Rinoshanda Health Detector
akatungamirira TV Commercial Displays Medical Displays
Nhanganyaya R & D Dept.
After Sale Service garandi Terms
Contact Information Bank Information Consultation & nyunyuta Map (KTC Shenzhen) Map (KTC Huizhou)
musha/ About KTC/ Company Profile
Shenzhen KTC Technology Group (hereinafter vachinzi "KTC"), rakaumbwa muna 1995 uye makuru Shenzhen, unyanzvi ari kugadzira kwakaita sandara paneeli kuratidza inouraya zvigadzirwa. Zviri mumwe tanga Vagadziri LCD monitors, LCD TVs, yezvokutengeserana LCD zviteshi uye wezvokurapa LCD zviteshi mu China.
Iye zvino, Group ane vashandi vanopfuura 6,000, uye vakangwara kugadzira maindasitiri mumapaki muna Shenzhen uye Huizhou, ane kwakakomba uriri nharaunda 400,000㎡. The Group kazhinji ine Shenzhen KTC Technology Co., Ltd., Shenzhen KTC Commercial Display Technology Co., Ltd., Shenzhen KTC Intelligent Technology Co., Ltd., Shenzhen KTC Medical Solutions Co., Ltd., Huizhou KTC Technology Co. , Ltd., Hong Kong KTC Technology Co., Ltd., etc.
Nguva dzose vanobatisisa mubhizimisi pfungwa "dzika Nokuvimbika Management, uye Funga Quality uye Service", KTC chaitwa pakupa yepamusoro zvinhu uye kushumira vatengi pamwe chemhando mureza. Kunosimbisa unhu maitiro uye kudzivirira zvakatikomberedza, uye akagadza pakutanga-kirasi utariri enyika. KTC rave vanopupurirwa pasi SGS ISO9001: 2015 yepamusoro utariri hurongwa, asi SGS ISO14001: 2015 Environmental Management hurongwa, asi SGS ANSI / ESD S20.20-2014 electrostatic zvinoerera mureza, kuti Electronic Industry Code of Conduct (EICC), ari kusangana pakati informatization uye maindasitiri Kutarisira enyika, etc.
Products pamusoro KTC Group apfuura vakawanda mudzimba uye mhiri kwemakungwa certifications zvakadai CCC, TCO03, CE, CB, FCC, Ul, SASO, TUV, ROHS, Energy Star, uye CECP. Uyewo, KTC anokoshesa zvikuru womukati utariri uye wakadzikwa nenzwi PDM, ERP, CRM, SCM uye mês utariri enyika.
Somunhu National mhoro hwemberi mukugadzira zvebhizimisi uye aizivikanwa zviri pamutemo hwokugadzira R & D centre muna Shenzhen, KTC akaumba mumwe inzwi R & D maitiro - KTC Technology Center, kuburikidza anopfuura maviri emakore dzamarudzi mubhizimisi uye kubudirira. muzinda uyu inozviita basa kuti makirisito uye mberi-kuguma zvemichina tsvakurudza uye kukura, itsva chigadzirwa kukura uye indasitiri ndiwedzere. Its R & D mapurani chinosanganisira Structural, Electrical, Software, Optical, Technology uye Product Departments uye Kuvhenekwa & experimental Center, iro rine mazana nenyanzvi R & D mainjiniya uye elites kubva sandara Panel kuratidza inouraya indasitiri. Mumwe R & D dhipatimendi pasi Technology Centre iri basa pamwe avo mabasa, zvokurimisa pakubatsirana kukura pamwe yepamusoro pakubatsirana kukura utariri hurongwa (PDM hurongwa), uye inocherechedza kukura zvinoitwa maindasitiri rwokugadzira. Dzavo R & D sandara uye unhu rokuongorora kugona chinzvimbo pakati vakanakisisa indasitiri.
Kutarisira kukura mushandi ose, KTC akaita kunoshamisa kubudirira mune guta mazano kune unyanzvi tarenda kudzidzisa, uye kugadzwa unyanzvi mukoti chikurudziro utariri mashandiro, etc .; izvozvo ndichifunda runogonesa kuvaka tarenda chikwata uye anoita kuedza kukuru kuti akwezve uye kudzidzisa zvakawanda unyanzvi vashandi, mukuru-caliber vashandi uye michina nyanzvi. Kuburikidza KTC University, itsva mushandi mentorship chirongwa, itsva backbones chirongwa, zvemukati vanodzidzisa, mubereko boka, kurovedza zvokunze uye kurovedza vamwe zvirongwa, KTC kunobatsira vashandi kuziva basa kuronga uye kuzvipira kuvandudzika, anokurudzira kuzvitsaurira nenyanzvi, unyanzvi mberi, uye utsanzi zvinhu uye. KTC anokudzwa iri "Craftsman Training Model Company mu Shenzhen" uye "Yemisi Enterprise mu Social Mutoro Nokuzadzika".
Sezvo KTC akapinda mumunda PC monitors kumavambo kuma1990, zvave kuita shingirira kuedza achitevera yepamusoro kuburikidza kwekuva inoshanda zvebhizimisi zvakanaka, nemasango umhizha uye basa munhu zvichienderana, achiratidza makwikwi zvikuru akangwara sandara Panel kuratidza munda. The Company yave successively achakudzwa se "Top 100 Electronic Information Enterprises mu China", "2008 Forbes CHINA 200 UP-UYE vakundi", "China Top 10 Color TV Export Company", "Top 500 Private Manufacturing Enterprises mu China", " Top 100 Manufacturing Enterprises mu Guangdong "," Top 100 Industrial Enterprises mu Shenzhen "," Top 100 Independent Innovation Enterprises mu Shenzhen "," Best ODM Suppliers ose Commercial LCD Equipment ", nezvimwewo, izvo akauya zvakanaka munzanga kushanda uye simba.
KTC kuti akangwara zvigadzirwa vanotengeswa kunyika uye kumatunhu kuSouth America, North America, Europe, Africa, Australia, uye Asia. The Company akagadza yakatsiga rokutengesa nomumbure uye vakaramba zvakanaka pamwe ukama mudzimba uye dzakawanda nomukurumbira mabhizimisi. Makore aya, KTC akaita yakabva yanyatsobatana kwakakwana uye gudzanzwi mudzimba uye mhiri kwemakungwa pashure-okutengesa mabasa.
Sezvo sandara Panel vanoratidza anopinda mutsva digitaalinen, vakangwara uye nomumbure anotsanangura nguva, KTC ari kuwedzera kune vakachenjera TVs, zvokurapa anoratidza, yezvokutengeserana anoratidza nezvimwe minda kuburikidza kuramba utsanzi, makirisito rwokugadzira Kubudirira, uye basa segmentation uye customization. Zvava rimwe Top 100 Electronic Information Enterprises mu China. With yakazvimirira R & D maitiro uye kwesayenzi zvakanaka, kuti Company kwave abvumirwa somunhu National mhoro hwemberi mukugadzira zvebhizimisi uye matunhu neminisiparati R & D muzinda Shenzhen. Uyewo kushingaira kudzidza zvitsva mienzaniso zvebhizimisi uye kutanga zvirevo zvitsva. Kwakavakirwa kusiyaniswa uye customized zvinhu uye mabasa, izvozvo anoedza kuvhura tarisiro itsva okutengesa kukura uye kuvaka uye kuramba vanatsiridze akangwara kugadzira maitiro uye chigadzirwa mhuri, saka kuti vateye nheyo kuti rakadzikama chepamusoro kukura.
Yekudzidza ramangwana, KTC achava, ane mufananidzo mutsva uye nokuomerera basa pfungwa "Customers First nokusika Rudo", akaramba kunatsiridza kugona kwaro itsva kukura, uye chigaro uye kuvandudza ayo zvakangwara kugadzira hurongwa, saka kupa vatengi dzakakwirira -quality ngwara kuratidzwa zvinhu uye mhinduro. With pfungwa "Technology kunonatsiridza upenyu hwedu", kuti Company ari kufamba akananga pamwero uye wakakwirira sandara, achiedza kuva nyika-kirasi nyanzvi akaigadzira akangwara sandara paneeli kuratidza zvigadzirwa.
Kuvandudza Living Condition pamwe Technology
Copyright © 2019 Shenzhen KTC Technology Boka Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.
Monday kusvika Chishanu